Aqoonkaab Burada minka | Aqoonkaab
Burada minka waa burada ugu badan ee ku dhaca hab dhisksa dhalmada ee dumarka. Burada minka oo sidoo kale loo yaqaan Myomas, Leiomyomas, ama Fibromas, waa buro ka samaysan unugyo isu tagay oo ku samaysma minka dumarka. Waxaa la qiyaasaa in 20 ilaa 50 boqolkiiba dumarka da’adoodu wayn tahay ay leeyihiin burqaha minka ku dhaca. Inkabadan 99 boqolkiiba oo kamid ah burqaha minku maahan kuwa kansar isku bedela, waa burooyin caadi.
Sababaha burada minka
Inkastoo aan la aqoon waxa sababa burqaha minka, waxaa la aamin san yahay in burqahaas kasoo unkamaan murqaha kuyaala minka dhexdiisa, kuwaas oo kadibna si deg deg ah u tarma. Taranka unugyadaas waxaa qayb libaax leh ka qaata dheecaanka loo yaqaan Estrojin.
Yaa khatar ugu jira
Dumarka kusii dhawaanaya dhalma goyska ayaa kujira khatarta ugu badan inuu ku dhaco. Sababtoo ah waxay mudo badan soo daynayeen dheecaan loo yaqaan Estrojin oo sidaa horay u sheegnayba saamayn ku leh samaysinka burqaha minka. Dumarka cayilan ee madawga ah ayaa sidoo kale loo arkay inay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco burqaha minka, inkastoo aan la garanayn sababta ka danybaysa mida danbe.
Sidoo kale cilmi baaris kale ayaa sheegaysa in dumarka ugu yaraan dhalay labo ilmood iyo kabadan aysan khatar wayn ugu jirin inuu ku dhaco, marka la bar bar dhigo dumarka aan waxba dhalin oo ayagu khatar taas ka badan ugu jira burada. Khubarada saynisyahanada caafimaadku ma hubaan in dhalmada caruurtu ay ka bad baadisay burqaha minka dumarka wax dhala iyo in samaysinka burquhu ay tahay wax si gaara uga dhaca dumarka madhalayska ah.
Xanuun laga dareemo gumaarka iyo bowdyaha
Hadii burqaha minku noqdaan kuwa waawayn oo la dareemi karo marka la samaynayo wiisatada, caadada oo dheeraata ama badata, iyo dhiig bax yimaada xilliga caadada waxay keeni karaan dhiig la aan, taasoo u baahan dawayn.
Inkastoo inta badan burqaha ama burooyinka minku ay iskood iskaga tagaan marka dumarku u dhawaadaan xilliga dhalmadayska, waxaa loo baahan yahay in dumarku ay la tashadaan dhakahtarkooda si loo hubiyo in burooyinka minku aysan korayn.
Dumarka qaar burooyinkoodu waynyihiin ama isku arka calaamado muuqda, waa daruuri in la daweeyo. dawada nooceeda iyo qaabka loo marayo waxaan laga raba inuu go aan ka gaaro dhakhtarkaaga khaaska ah.
Hysterectomy: waa qalliin lagu sameeyo dumarka qaba burooyinka minka, waxaana la jarayaa minka haweenayda.
Conservative surgical therapy: waa qaab ka duwan kii hore, dhakhaatiirta qalliinka ee daweenaya bukaanku waxay isku dayayaan inay saaraan burooyinka ayagoo aan minka ka saarin haweenayda si ay markale wax u dhasho.
Gonadotropin-releasing hormone agonists: Waa hab dawo oo kaliya lagu dabiibayo bukaanka. Dawadaan waxay yaraynaysaa dheecaanka loo yaqaan Estrojiin taasoo keeneysa in haweenaydu si dhakhsaa u dhalma dayso. Sidoo kale dhakhaatiirtu waxay isticmaalaan dawadaan markay doonayaa inay qalliin ku daweeyaan burooyinka minka, isla markaas dawadu waxay yaraynaysaa miisaanka burooyinka si qalliinku u fududaado.
Previous PostDhakhtarada haweeney walba u baahan tahay Next PostXanuunka murqaha, seedaha, lafaha iyo kala goys yada